कृष्णबहादुर महरा र सिताको ३० वर्षे प्रेमकथा : ‘मलाई जिस्क्याउने पल्लो गाउँका मास्टरसँगै विहे भयो’ - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ९ माघ २०७६, 11:58 am
काठमाडौं, २३ चैत्र । पल्लो गाउँका एकजना ‘मास्टर’ घरमा आइरहन्थे । उनी मास्टरलाई पानी दिन्थिन् । ‘मास्टर’ले उनलाइ कहिले दिदी भन्थे, कहिले बहिनी भन्दै जिस्काउँथे । उनी लजाउँथिन् ।
‘मलाई त पत्यार नै लागेको थिएन उहाँसंग मेरो बिहे हुँदैछ भनेर,’ पुर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराकी पत्नि सितालाई अहिले पनि त्यो पल आश्चर्य लागि रहेको छ ।
एकदिन घरमा बुवा र आमाबीच ठा’कठुक पर्यो । बुवा घर छोडेर भारततिर लागे । त्यसपछि उनी स्कुल जानै पाइनन् । उनी २/३ कक्षासम्म स्कुल गइन् । घरको आर्थिक अवस्था पनि राम्रै थियो । खान लाउन पुग्थ्यो तर कामको साह्रै दुःख थियो । त्यसैले पनि उनी स्कुल जान पाइनन् ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचन पश्चात पार्टीले ज नयु द्धमा जाने कठोर साेँच थियोे । त्यसको एक वर्षपछि फगुन १ गते ज न यु द्धको घो षणा भयो । तर महरा भने माघ २९ गते नै भूमिगत हुँने भन्दै घरबाट निस्किए । महरा घरबाट निस्कँदा कान्छी छोरी प्रगतीले रुँदै ‘नजानुस् बावा’ भनेको महराले अझै बिर्सेका छैनन् ।
ज नयु द्ध घोषणा गरे लगत्तै तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई तत्कालिन राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेताहरुको टाउ काको मुल्य तोकिएको थियो । त्यतिबेला महरा रोल्पाकै जङ्कोटमा जनताको घरदैलोमा राजनीतिक प्रशिक्षणमा व्यस्त थिए । यता श्रीमानलाई सम्झेर सीताको आँखामा आँशुको ढिक्का ओइरिरहन्थ्यो । कयौँ रात अनिदो वित्यो । आँशुले सिरानी भिजे । उनले साना बाल‍‍ बच्चा हेरेर चित्त बुझाउँथिन् । समाचारमा माओवादी कार्यकर्ताको मृ त्यु भएकोे, ठाउँ–ठाउँमा भि ड न्त भएको खवरले उनलाई अत्यास लाग्थ्यो । ‘कतै उहाँ पनि भि ड न्त मा पर्नु भयो कि ?’ डरले उनको मुटु काँप्थ्याे ।
यता राज्य पक्षबाट सितालाई यातना दिने क्रम शुरु भयो । ‘दिनहुँजसो, ‘तेरो श्रीमान कहाँ छ ? तेरो श्रीमानलाई भर्खरै बोला, नत्र तिमीहरुलाई मा रिदिन्छौँ’ भन्दै प्रहरीले मानसिक या तना दिने गर्थे,’ सितालाई तत्कालिन राज्यको व्यबहार स्मरण छ,‘पकाएको खाना समयमा खान नपाइने, आफ्नै घरमा पनि आरामसंग निदाउन नपाइने, कति बे ला प्र हरी आएर प क्रेर लैजान्छन् र मा र्छन भन्ने त्रासमा बाँच्नु पथ्र्यो ।’
एक दिन एकाबिहानै प्रहरी आएर परालमा आगो लगाइदिए । बच्चाहरुको किताब कपी र केही खाद्यान्न पनि परालसंगै जलाइदिए । घरको कुना–कुना खानतलासी गरे । घरि–घरि मा र्ने धम्की दिन्थे । राती ९ बजेसम्म घरको आगनमा आगो बलिरहेको थियो । कपि किताव आगोमा जलेपछि बच्चाहरु एक महिना सम्म स्कुल जान पाएनन् । नयाँ किताव किन्नका लागि सीतासंग पैसा थिएन । प्रहरीको ड रले पनि बच्चाहरु स्कुल जान मानेनन् ।
त्यो घटनाको केही दिनपछि पुनः प्रहरी घरमा आए । ‘तेरो श्रीमान घर आयो कि आएन, चीठी पठाएको होला, के लेखेर पठाएको छ’ भन्दै सीतालाई प्रश्न गरे । सीताले आफुलाई थाहा छैन भन्दै उम्किन खोजिन् । तर प्रहरीले उनको कुरा पत्याएनन् । ‘तेरो श्रीमानलाई नबोलाएसम्म तँलाई थु नेर राख्छौ’ प्रहरीहरु भन्दै थिए । प्रहरीले उनको हातमा हतकडी लगाएर ‘हिँड’ भन्दै धकेलेर भ्यानमा हाले । लालाबालाको रुवाबासी चल्यो ।
सीताको घरमा एकजना काका ससुरा नाता पर्ने बाजे बस्थे । उनले घरको काममा सघाउँथे । उनी केहीे सुस्तमनस्थिति स्वभावका थिए । उनलाई सबैैले ‘लाटाबाजे’ भनेर बोलाउँथे । ती बाजेलाई पनि हतकडी लगाएर प्रहरीले भ्यानमा कोच्यो । भ्यानमा लाटा बाजे बाहेक अरु सबै अपरिचत थिए । बोल्न पनि नजान्ने, ‘लाटा बाजे’लाइ प्रहरीले किन प क्रि ए को होला,’ सिताको मनमा प्रश्न उठेको थियो । तर प्रहरीले ‘यो लाटो होइन, महराकाे सिआइडी हो’ भन्दै ती बृद्धलाई निकै कु टे ।
सीता पनि भ्यानभित्रै कुटिइन् । बाटैभरि कुट्दै–कुट्दै प्रहरीले उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लिवाङ्ग पुर्याए । प्रहरीको कुटाइबाट ‘लाटाबाजे’कोे टा उको फु ट्यो ।
यता सितालाई माओवादी भएको आरोपमा एक महिना हि रा स तमा राखियो । हिरासत बसाईँका दिन सम्झँदा सिताको शरीरमा अहिले काँडा उम्रन्छ । ‘दिनहुँ शारिरिक र मानसिक यातना दिन्थे । घरमा स–साना बच्चाहरु मात्रै थिए,’ सिता भन्छिन्,‘बच्चाहरुले के खाए होलान्, कसो गरे होलान् । म हि रा सतमै दिनरात बच्चाहरुको यादले रो एर ब सेँ ।’
एकदिन उनले प्रहरीसंग अनुरोध गरिन्, ‘मेरो श्रीमान राजनीति गर्ने मान्छे, उहाँ जता पनि जान सक्नु हुन्छ । म जस्तो खेती किसानी गरेर बच्चा पालेको मान्छेलाई थु ने र के गर्नु हुन्छ ? मलाई छिटो छोडिदिन पर्यो, मेरो बच्चाहरुको बिचल्ली भयो ।’
बनमा काँचो दाउरा काटेको भएर आफुलाई प्रहरीले प क्रा उ गरेको होला भन्ने लाटा बाजेलाई भ्रम थियो ।
तारिखमा जाँदा प्रहरीले ती लाटा बाजेलाई सोध्थे–‘तेरो महरा सर घरमा आउँछ की आउँदैन’ जवाफमा ती बृद्ध भन्थे,– ‘अव मैले बन गएर काँचो दाउरा का ट्दिन हजुर, वन नै जाँदिन बरु, मैले अब यस्तो गल्ती गर्ने छैन, मलाई छोडिदिनुस् ।’ उनको कुरा सुनेर प्रहरी पनि हाँस्थे ।
त्यसपछी ‘यो मान्छे त सोझो रहेछ’ भनेर लाटा बाजेलाई प्रहरीले छोडिदिए । त्यो भन्दा पहिले ‘महराको सिआइडि’ भनेर लाटा बाजेले निकै कु टाइ खानु पर्यो ।
प्रहरीले सीताकोे पाखुरामा समातेर ‘हिँड’ भन्दै धकेले । घरको पीँडिमा उभिएकी उनले ‘कहीँ जान्न’ भन्दै अड्डी लिइन् । प्रहरीले ‘तँलाई आजै मा रि दिन्छु, तेरो आज अ न्तिम दिन हो’ भनेर धम्की दिए र उनकोे गर्ध नमा बन्दु कको ना लले प्र हार गरे । उनलाई असैहय पीडा भयो । प्रहरीको हातबाट म र्नु भन्दा भागेर ज्या न जो गाउनु उत्तम भन्दै उनी प्रहरी को घेरा तो डेर भा गिन् । घरको पीडिबाट एकै चोटी कान्ला नाघेर मकै बारीमा पुगेकी उनलाई ल खेट्दै प्रहरीहरु जंगलसम्म आए । तर उनलाई भेट्न नसकेर फर्किए ।
राती अबेर सम्म बच्चाहरुसंग भेट हुन सकेन । बच्चाहरु पनि आमालाई खोज्दै जं ग ल सम्म पुगे । आमालाई नभेटे पछि बच्चाहरु रुदैँ बाँसको झ्याङमा लुकेर बसे । रात निकै छिप्पी सकेको थियो । बाघ भालुको डर पनि उत्तिकै भएकाले सीता निकै आत्तिएकी थिइन् । त्यतिबेला कान्छा छोरा राहुल ८ वर्षका थिए । साना बच्चालाई कतै ‘बाघले खायो कि, या सर्पले ड स्यो कि?’ यही सुर्ताले सीता बेचैन बनिन् । खोज्दै जाँदा बच्चाहरुलाई बाँसको झ्याङ्ग भित्र भेटेपछि उनी खुसी भइन् ।
बाँसको झ्याङ्गमै बसेर छोरा–छोरी र आमाले केही खासखुस गरे । उनीहरुको आवाज रुखमा बास बसेको चराले पनि सुन्यो या सुनेन । तर आमा र सन्तान बीच केही सल्लाह भइरहेको थियो । तेज कुमारी ‘उन्नती’ अलि कुरा बुझ्ने भइसकेकी थिइन् । सीताले छाेरीलाइ घर जानका लागि आग्रह गरिन् । तर उन्नतीले घर नजाने भन्दै रुन थालीन् । ‘घर गयो भने प्रहरीले मा र्छ न, बरु यतैबाट भागम आमा’ उन्नतीले यसो भनेपछि आमा सितालाई द बा व बन्यो ।
त्यतिबेला सम्म सीताले भू मिगत हुन्छु भनेर सोँचेकी पनि थिइिनन् । बिहे गरेर पहिलो पटक भित्रिएको घर, दुख गरेर संम्हालेको घर, लिपपोत गरेर चिटिक्क पारेको आगन, खेतिपाती, गाई–बाख्रा, वालबच्चा सबै उनकाे प्रीय संसार थियो ।
सीताले आफ्ना बच्चाहरुलाई भित्र लिएर गइन् । चुलाको छेउमा बसेर आफुमाथि भएको घ टनाका बारेमा साइला ससुरासंग सबै बेली बिस्तार लगाइन् उनले । उनको कुरा साँइला ससुराले बढो गंभिर मुद्रामा सुनिरहेका थिए । केही क्षण सन्नाटा छायो । सीता कुरा गर्दा–गर्दै भक्कानिन्थिन् ।
एकै छिनको मौनता भंग गर्दै साइला ससुराले भने,– ‘च्वच्वच्व….. तिमीहरु बढो आपतमा परेछौ, यी केटाकेटीको ज्या न जोगाउनु छ भने अव घर नजाऊ । परिस्थिति ठिक छैन, कतिबेला प्रहरी आएर गो ली हा नेर मा र्ने हुन् ।’ उनले भूमिगत भएर ज्यान बचाउनका लागि सीतालाई सल्लाह दिए । कान्छी छोरी प्रगती र राहुल सानै थिए खासै कुरा बुझ्दैनथेँ । उन्नतीले आमा र साइँलाबा बीचको कुरा चाख मानेर सुनिरहेकी थिइन् । साइला ससुराको आग्रह पश्चात उनीहरु त्यो रात त्यही बसे ।
यता, जेठा छोरा निर्मलबारे कुनै खबर आएको थिएन । सीतालाइ छाेराकाे निकै अत्यास लागेको थियो । साथीको घरमा बसेका निर्मललाई पनि घरमा भएको घ ट नाका बारेमा केही थाहा थिएन । उनी अर्को दिन बिहान घर फर्किए । घर सुनसान थियो । बिहानसम्म घरमा बत्ति बलिरहेको देखेर निर्मल झस्के । घरमा आमा नभएको संकेत उनले पाइसकेका थिए ।
भाइबहिनी आगनमा खेलेको पनि उनले देखेनन् । निर्मलले कान्लामाथिबाटै अड्कल काटे, ‘घरमा केही गडबडी भएको छ ।’ त्यतिबेला उनले घर जानु उपयुक्त ठोनेनन् । अब के गर्ने ? आमा, भाइ–बहिनी र दिदी क हाँ गए होलान् ? कतै प्रहरीले मार्यो कि ? या कतै भागेर ज्यान जोगाए कि ? उनको मनमा यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरु उब्जिए । निर्मल ‘साइला बाजेको घर तिर लागे ।
२०५६ सालताका सीताले प्रगती र राहुललाई लिएर दाङ्ग झरिन् । उन्नती र निर्मल भने पार्टी मै पूर्णकालिन भइसकेका थिए । उन्नती ‘जनकलाकार’ थिइन् । गाउँ–गाउँमा जनताका गीत गाउँदै हिड्थिन् । निर्मल भने जनमुक्ति से नामा आवद्ध भइसकेका थिए । त्यतिबेला सीताले दाङ्ग पुगेर एक जना आफन्तको सहयोगमा कोठा खोजिन् । बच्चाहरुलाई नजिकैको एउटा स्कुलमा भर्ना गरिदिइन् र आफु पनि भूमिगत शैलीमा दाङ्गमै लुकेर बसिन् । श्रीमानसंग दुई महिनादेखि सम्पर्क भएको थिएन । महरालाई परिवारमाथि भएको अत्याचारका बारेमा पनि केही जानकारी थिएन । कहिलेकसो बिस्वासिलो मान्छेको साथमा महराले चिठी पठाउने गर्थे ।
दाङ्गमा पनि सुरक्षा चुनौतीे टड्कारो थियो । कोही नयाँ मान्छे देख्यो कि प्रहरीले पक्रेर जेल हाल्थे । जनताको घरमा भन्दा दाङ्गको बसाई निकै चुनौतिपूर्ण थियो उनका लागि । त्यसैले उनले दुईजना बच्चाको नाम परिवर्तन गरेर स्कुलमा भर्ना गरिदिएकी थिइन् । छिमेकीहरुले ‘तपाईको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ’ भनेर सोध्थे । जवाफमा सिता भन्थिन्,‘मेरो श्रीमान त कान्छी श्रीमती लिएर इन्डियातिर गएर बसेको छ । ड्राइभर हो, उतै गाडी चलाउँछ रे, अरु त केही थाहा छैन’ । उनी आफै पनि त्यहाँ आफ्नो परिचय लुकाएर बसेकी थिइन् । उनी दाँङ्गमा लगभग २ वर्ष वर्ष जति बसिन् ।
सीताले २०५८ सालमा दाङ्ग छोडेर फेरि उनी यु द्ध मै फर्किइन् । प्रगती र राहुल पनि पढाई छोडेर पार्टीमा लागे । त्यसपछि घरका सबैजना पार्टीमा भूमिगत भए । सीताले पार्टीले चलाएको घरेलु उद्योगमा काम गर्न थालिन् । उद्योगमा सल, धोती सुइटर बुन्ने काम हुन्थ्यो । सुरक्षा चुनौतिका कारण बेला–बेलामा उद्योग सारिरहनु पथ्र्यो । उक्त उद्योग ५ वर्षसम्म चल्यो । पछि देशमा सेना परिचालन भएपछि सेनाले जलाइदिए ।
माओवादीहरु जंगलमा बस्छन् भन्ने आम मान्छेलाई भ्रम हुन्थ्यो । तर आफुहरु जनताको बीचमा रहेको सीताले बताइन् । ‘दिनभरि जनतासंग काम गथ्र्यौ, रात परेपछि जनताहरुलाई जम्मा गरेर संगठन बनाउने काम हुन्थ्यो, नेताहरुले जनयु द्ध का बारेमा कक्षा दिने गर्नु हुन्थ्यो । हामीहरु पनि जिल्ला जिल्ला पुगेर संगठन निर्माण गथ्र्यौ,’ सीताले अनुभव सुनाइन् ।
२०६२/६३ मा राजतन्त्र विरुद्ध १९ दिने जनआन्दोलन हुने भयो । माओवादी पनि उक्त आन्दोलनमा सहभागि भए । जनआन्दोलन पश्चात देशको राजनीतिले केही काँचुली फेर्यो । आन्दोलनको सफलापछि १० वर्षे स शस्त्र यु द्ध त्यागेर माओवादीले ब न्दुक बिसाए । बृहत शान्ति सम्झौता भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो पटक माओवादी सरकारमा सामेल भएको थियो । सरकारमा कृष्ण बहादुर महरा पहिलाे पटक संचारमन्त्री भए । महरा मन्त्री भएपछि सीता पनि राजधानी आइन् ।
‘मन्त्रालयको क्वाटर भन्दा त भूमिगत जीवन नै ठिक थियो, मन्त्री क्वाटरमा सुरक्षा घेराबीच बस्नु पर्र्नेे, गाउँमासंगै हिँडेका, संगै खाएका साथीहरु कहाँ गए होलान भनेर याद आउथ्यो,’ सिता भन्छिन् । क्वाटरको बसाइँ पश्चात यु द्ध मा संगै हिँडेका साथीहरु सम्झेर बेला बेलामा सीताको मन कुडिन्थ्यो । जनताको घर दैलोमा जस्तोे रमाइलो र आफ्नो पन त्यहाँ थिएन ।
ज न यु द्धमा प्रत्यक्ष दुख झेलेर मन्त्रालयको क्वाटरसम्म आइपुगेकी उनको भोगाई आम महिलाको भोगाई भन्दा नितान्त फरक छ । श्रीमान यु द्ध मा सामेल भएकै कारण आफु र सन्तानले भोगेको पीडा कसैसंग तुलना गर्न नसकिने खालको थियो । तर पनि उनले महरासंग आफ्नो भोगाइलाई लिएर कहिल्यै गुनासो गरिनन् । आफ्ना व्यक्तिगत समस्यालाई लिएर श्रीमानससंग झगडा गरिनन् ।
(यो लेख तयार पर्दाताका) कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभाको सभामुख थिए । बालुवाटारमा सभामुखको लागि छुट्टै क्वाटरको ब्यवस्था थियो । श्रीमान सभामुख भएयता सीता लगायत परिबार क्वाटरमा बसाई सरे ।
जन यु द्ध सुरु भएदेखि घर छोडेका उनीहरु अहिलेसम्म कैयौ पटक कोठा सरिसकेका छन् । शान्ति वार्ताको समयमा काठमाडौँ छिरेका उनीहरु सुरुमा कालोपुलमा डेरा गरि बस्थे । त्यहाँ ८ हजार भाडा तिर्नु पथ्र्यो । कहिले भक्तपुर, कहिले बालकोट, कहिले पेप्सीकोला त कहिले सुकेधारा र मण्डिखाटारसम्म कोठा सरेको सीताले बिर्सेकी छैनन् ।
उनीहरु सभामुख क्वाटरमा बसाई सरेको एक वर्ष हुन लाग्यो (लेख तयार पार्दा ताका) । त्यो भन्दा पहिले पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वाटरमा बस्दै आएता पनि सभामुखको कार्यकाल सकिएपछि कहाँ जाने भन्ने कुनै टुङ्गो नभएको सीताले बताइन् ।
‘उहाँको अवधी सकिए पछि कहाँ जाने केही थाहा छैन, फेरि कोठा खोजेर बस्नु पर्ने त होला नि’ उनी भन्छिन् । रोल्पामा प्रह रीले भत्काइदिएको पुरानो घर छ । तर, घर बस्न नमिल्ने गरि जीर्ण बनेको छ । । श्रीमानले राजनीति गर्ने बेलासम्म काठमाडौँमै बस्ने र पछि के गर्ने भन्ने बारेमा उनीसंग कुनै दीर्घकालिन योजना छैन । राजनीतिले नै भावि योजना निर्धारण गर्ने उनलाई विश्वास छ ।
नेपाली राजनीती सन्तोषजनक नभएको उनले बताइन् । तर, उनलाई मन पर्ने नेता ‘प्रचण्ड’ हुन् । प्रचण्डले नै राज्यसत्ता राम्रोसंग चलाउन सक्ने र विश्वास नेता भएको उनको ठम्याँई छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु भएको ज न यु द्धमा आफ्ना श्रीमानले गरेको योगदान अमुल्य रहेको उनी बताउँछिन् ।
श्रीमानलाई हरेक परिस्थितिमा साथ दिएकी उनले श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा कहिल्यै दरार आउन दिइनन् । बिहे गरेको दिनदेखि अहिलेसम्म आफुहरुबीच झ ग डा नभएको कुरा सुनाउदैँ गर्दा सीताको मुहार प्रफुल्ल देखिन्छ । वास्तवमा यो कुराले उनलाई निकै आनन्द दिने गर्छ ।
हाल राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने तरखरमा छ। एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भन्दै संसदमा पेश हुन नदिएपछि विभिन्न देशी विदेशी शक्तिको जालझेलमा फसेर अहिले पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा करi वास जीवन विताई रहेका छन्। आफ्नो राजनीतिक भविष्य, व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभलालच सबैलाई वेवास्ता गर्दै देशको हित चिताउने महरा र उनको परिवारको पारिवारिक विगत रीता बुढाथोकीले दियो पोष्टमा लेख्नु भएको यो लेख हामीले जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौं । सम्पदाक। प्रथम प्रकाशन मिति : २३ चैत्र २०७६। साभार मिति : ९ माघ २०७६।